NGO, INGO (အသင်းအဖွဲ့) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
Education NGO (ပညာရေး) (0/0)
Environment NGO (ပတ်ဝန်းကျင်) (0/7)
Health NGO (ကျန်းမာရေး) (0/4)
Humanitarian (လူသားချင်း စာနာမှု) (0/12)
Industry Associations (လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းများ) (0/9)
Orphanage (မိဘမဲ့ ဂေဟာ/ကျောင်း) (0/26)
Political (နိုင်ငံရေးရာ) (0/5)
Telephone09 771 555569
Myanmar Athletics Federation Featured
US Aid Featured
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း131
Aus Aid Featured
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း95
Telephone+95 (1) 536-509
Burma | U.S. Agency for International De... Featured
USAID/Burma, 110 University Avenue, Kamayut Township, Rangoon, Burma
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း78
Telephone+31 (0)88 60 24300
CBI - Myanmar Featured
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL The Hague, The Netherlands
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း140
Telephone+95-1-255473, 255474, 255475, 255476
JICA - Myanmar Office Featured
TelephonePhone: +95 1 8500 801, 8500 803
KOICA - Myanmar Office Featured
No.514 (A),4Ward, Waizayandar Road, South Oakkalapa Township, Yangon
Telephone+95 1 230 555 0-1
Myanmar - GiZ Featured
45 Inya Myaing Road Golden Valley \_(2\_) Ward, Bahan Township YANGON MYANMAR
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း110
Daw Khin Kyi Foundation Featured
​ဒေါ်​ခင်​ကြည်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း မှ​အလှူ​ငွေ​လက်​ခံ​လျှက်​ရှိ​သော ဘဏ်​စာ​ရင်း​များ
ယခု​ရက်​ပိုင်း​အတွင်း အရှိန်​အဟုန်​မြ​င့်​မား​လာ​ခဲ့​သော မိုး​သည်း​ထန်​စွာ ရွာ​သွန်း​မှု​များ​ကြော​င့် မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တစ်​လွား​တွင် ရေ​ဖုံး​လွှမ်း​မှု​များ​ဖြစ်​ပွား​လျှက်​ရှိ​ပါ​သည်။ ယခု​အဖြစ်​အပျက်​နှ​င့် ပတ်​သက်​၍ ကြို​တင်​အသိ​ပေး အကြောင်း​ကြား​မှု​မရှိ​ခဲ့​ခြင်း​ကြော​င့် အဖက်​ဖက်​တွင် ကြို​တင်​ပြင်​ဆင်​မှု​များ လွန်​စွာ​အား​နည်း​ခဲ့​ပြီး ရေ​ဘေး​သင့်​ပြည်​သူ​များ​မှာ ကိုယ်​ရော​စိတ်​ပါ ထိ​ခိုက်​မှု​များ ရင်​ဆိုင်​ကြုံ​တွေ့​နေ​ရပါ​သည်။ လို​အပ်​ချက်​ပေါင်း​များ​စွာ​အနက်​မှ အခြေ​ခံ​လို​အပ်​ချက်​ဖြစ်​သော ဆန်​စပါး​ရိ​က္ခာ​နှ​င့် သောက်​သုံး​ရေ​သန့်​ရောက်​ရှိ နို်င်​ရေး​မှာ အထူး​အလေး​ထား ဆောင်​ရွက်​ရမ​ည့်​အရေး​ကိ​စ္စဖြစ်​ပြီး နောက်​ဆက်​တွဲ ဘေး​ရော​ဂါ ဆိုး​ကျိုး​များ ဖြစ်​ပွါး​မည့် အရေး​ကို​ပါ စိတ်​ထဲ​ထည့်​ကာ ဆောင်​ရွက်​ရမည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ဒေါ်​ခင်​ကြည်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း အနေ​ဖြ​င့် ယခု​ကဲ့​သို့ လွန်​စွာ​အရေး​ကြီး​သော အချိန်​ကာ​လတွင် အခြား​အခြား​သော စီ​မံ​ချက်​ကိ​စ္စများ​ကို ဆိုင်း​ငံ့​ပြီး နိုင်​ငံ​ဝမ်း ရှိ လူ​ငယ်​လူ​ရွယ်​များ​၏ အကူ​အညီ စွမ်း​ဆောင်​ချက်​များ​ဖြ​င့် ကယ်​ဆယ်​ရေး​လုပ်​ငန်း​များ​ကို အဓိ​က
ထား​ကာ အရှိန်​အဟုန်​ဖြ​င့် အချိန်​နှ​င့်​တပြေး​ညီ ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိ​ပါ​သည်။ ပြည်​တွင်း​ပြည်​ပရှိ အလှူ​ရှင်​များ​အနေ​ဖြ​င့် အောက်​ဖော်​ပြ​ပါ ဒေါ်​ခင်​ကြည်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း ၏ ဘဏ်​စာ​ရင်း​များ​သို့ အလှူ​ငွေ​များ ပဝ် လှူ​ဒါန်း​ခြင်း​ဖြ​င့် အမှန်​တကယ် လို​အပ်​နေ​သော ရေ​ဘေး​သင့်​ပြည်​သူ​များ​ကို ကူ​ညီ​နိုင်​ပါ​သည်။
Myanmar Red Cross Society Featured
Myanmar Red Cross Society invites you to help flood affected people by donating Myanmar Kyats or US Dollars
09 977 11 5555, 09 861 0262, 09977115580, 0943083863 Ph. 01 392028, 392029, 392030
Myanmar Red Cross Society (Yangon Office) No. 42, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း327
NCV (Noble Compassionate Volunteers) Featured
Address: Building 3, Room - 3, MICT Park, Hlaing Township, Yangon.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း259
Myanmar-related documents on UNHCR Data ...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNHCR ၏ဒေတာပေါ်တယ်နှင့်သက်နှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ (mahana)
မဟန ခေါ် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့
Myanmar Maternal and Child Welfare Assoc...
Market Research Association - Market Res...
Market Research Association (MRA) Myanmar isaself-funded and independent professional organization representing all research agencies in myanmar.
Welcome to the Mandalay Home Owners Asso...
Welcome to the Mandalay Home Owners Association
Chiang Mai Secretariat Office
Address: P.O. Box 195, Chiangmai University, Chiang Mai 50200, Thailand
c/o Asian Migrant Centre
Address: c/o Kowloon Union Church,4Jordan Road, Kowloon, Hong Kong
ဈေးကွက် သုတေသန အသင်း
AAPPB - Assistance Association for polit...
Contact Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)
Rangoon Office address
33/Extension ward, North Dagon Township Rangoon.
ဖုန္း +၉၅(၀)၉၂၅ ၄၂၁၄၁၇၅
No. 58/E Inya Road, Kamayut Township, Yangon Myanmar
Phone: (+95) 01 502 661
Telephoneဖုန်း – 09 4480 33139
Consumer Association Myanmar
တိုက်အမှတ်၅၆ (စ)က(၅) သမိုင်းမြို့သစ်(၃)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရန်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း57
Rotary Club of Central Yangon (RCCY)
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, No 40, Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon 11211
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း67
Rotary Club Yangon
Rotary Club of Yangon - Rotary isaglobal network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who come together to make positive, lasting change in communities at home and abroad.
We areanon-profit organization that promotes the education of children and adolescents in Myanmar (Burma), one of the poorest countries in the world. Here we are guided by the principles Help for Self-Help and Learning by Doing: For us helping does not mean distributing gifts. Rather, help is only effective if it gives people the chance to live their lives free from hunger and distress themselves.
Telephone+951 545 863, 549 956, 551 330
No.2, Damadarna Street, Nat Chaung Quarter, Tarmwe Township, Yangon.
Entrepreneurship Development Network Asi...
Ph : 959 76521 9318, Fax: 951 503 705
3rd Floor, Number 49, 44th Street. Botahtaung, Downtown Yangon.
not-for-profit civil society organisation committed to developing the resources for documentary photography, filmmaking and multimedia production in Myanmar. We work to develop training opportunities and workshop programs, host photographic exhibitions and screenings of documentary film and multimedia, and provide support for independent documentary projects.
Education NGO (ပညာရေး) (0)
Environment NGO (ပတ်ဝန်းကျင်) (7)
Health NGO (ကျန်းမာရေး) (4)
Humanitarian (လူသားချင်း စာနာမှု) (12)
Industry Associations (လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းများ) (9)
Orphanage (မိဘမဲ့ ဂေဟာ/ကျောင်း) (26)
Political (နိုင်ငံရေးရာ) (5)